किन तपाईंको व्यवसाय सामाजिक हुनु पर्छ | Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 3, 2012 बिहीबार, जुन 18, 2015 एन्ड्र्यू के कर्क
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि सोशल मिडिया मार्केटिंग जताततै छ। हामी हाम्रा टिभी स्क्रिनहरूमा र हाम्रा ईमेलहरूमा परिचित ट्विटर र फेसबुक आइकनहरू देख्छौं। हामी अनलाइन र अखबारमा यसको बारेमा पढ्छौं।
मार्केटिंगका अन्य अधिक परम्परागत रूपहरू भन्दा फरक, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग साना व्यवसाय मालिकहरूको लागि पहुँचयोग्य छ भाग्य 500 कम्पनीहरू। मान्छे मा Wix तपाईंको व्यवसायमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव चित्रण गर्ने एक इन्फोग्राफिक सँगै राखेको छ। यहाँ हाइलाइटहरू छन्:
Americans०% अमेरिकी वा २80 मिलियन मानिस लीजमा एउटा सामाजिक नेटवर्कमा प्रयोग गर्छन्। ट्वीट यो
सामाजिक नेटवर्कमा सक्रिय of 53% व्यक्ति कम्तिमा एउटा ब्रान्ड पछ्याउँछन्। ट्वीट यो
Small 48% साना व्यवसाय र उद्यमीले सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेर बिक्री बढावा दिए। ट्वीट यो
Small 58% साना व्यवसायहरूले सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेर मार्केटिंग लागत घटाए। ट्वीट यो
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू4अर्ब वस्तुहरू दिनहुँ साझा गर्छन्। ट्वीट यो
टैग: फेसबुकइंफोग्राफ़कसामाजिक बजारसामाजिक मिडिया मार्केटिङकिनकिन सामाजिककिन सामाजिक मार्केटिंगकिन सामाजिक मिडियाकिन सामाजिक मिडिया मार्केटिंगकिन तपाईंको व्यापार सामाजिक हुनु पर्छकिन तपाईंको व्यापार सामाजिक हुनुपर्छwix
आउटब्रेन: ड्राइभ ट्राफिक सामग्री सिफारिशहरूको साथ
जुलाई १,, २०१ at १::3२ अपराह्न
सम्पूर्ण मार्केटिंग टेक ब्लग टीमलाई धन्यवाद; यो 'तपाइँ सबै संग काम गर्न एक विस्फोट। धेरै अन्य पोष्टहरूको लागि हेर्दै।
उत्कृष्ट इन्फोग्राफ। मलाई यसको शैली मनपर्‍यो। राम्रो काम राख्नुहोस्।
@nelsonta: disqus, दयालु शब्दहरूका लागि धन्यवाद!
वाह। सामाजिक मिडिया हरेक दिन बढ्दै छ। मलाई आश्चर्य हो कि यदि बबल बुलबुले कहिले फुट्नेछ।
@ twitter-100637060: disqus, तपाईं छलफलको एक ठूलो बिन्दु ल्याउनुहुन्छ। यद्यपि मलाई लाग्दैन कि यो एउटा हो, तर कहिले हो। सबै महान टेक्नोलोजीहरू र प्रचलनहरू अर्को "पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो" द्वारा पार हुन्छन्। प्रश्न यो हो कि यो कहिले हुन्छ?
म तपाईंसँग यस इन्फोग्राफिकमा अधिक सहमत हुन सक्दिन किन किन व्यवसायहरू सामाजिक हुनुपर्दछ। यो केवल जाँदै गरेको प्रवृत्ति मात्र होइन। सामाजिक मिडिया रहन को लागी यहाँ छ। ठूलो दर्शकहरूसँग संलग्न हुने बढी अवसरको अलावा, यसले परम्परागत मार्केटि activities गतिविधिहरूको सस्तो विकल्प प्रदान गर्दछ।
@ twitter-302771660: disqus तपाईंको टिप्पणी र उत्साहका लागि धन्यवाद! परम्परागत मार्केटिंगको सस्तो विकल्प हुनुले सोशल मिडियालाई मार्केटिंगमा पूर्ण नयाँ फ्रन्टियर बनाउँछ। जहाँ विगतमा प्राय जसो कम्पनीहरूले विशेष गरी साना व्यवसायहरूले टिभी वा रेडियो विज्ञापनमा भाग लिन सक्तैनन्, सामाजिक मिडिया र ब्लगहरू खुला खेल मैदान हो।
अगस्ट,, २०१ 1 2012:२१ अपराह्न
नमस्ते एन्ड्र्यू! धेरै सत्य!
सोशल मिडियासँग अफरहरू छन्। चालहरू जान्नुहोस् र आफ्नो लक्षित परिणामहरूमा पुग्न ब्याज गर्न र ड्राइभ गर्न जारी राख्नुहोस्। सबै प्रयासहरू समयमै भुक्तान गरिन्छ। धैर्य राख्नुहोस् 🙂